त्रासकाबीच खुशीको खबर : इजरायली सरकारले केही दिनमा कोरोना बिरुद्धको औषधी विश्वभरी पठाउँने – " सुलभ खबर "
त्रासकाबीच खुशीको खबर : इजरायली सरकारले केही दिनमा कोरोना बिरुद्धको औषधी विश्वभरी पठाउँने
जेरूसलेम । विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस द्रुत गतिमा फैलिने डरको बीचमा एक सकरात्मक समाचार आएको छ । इजरायली सरकारले दाबी गरेको छ कि अर्को केही हप्तामा उनीहरूका वैज्ञानिकहरूले कोरोना भाइरस विरुद्धको औषधि तयार गर्नेछन् । जानकारी अनुसार ९० दिन भित्र औषधि बजारमा पनि ल्याइनेछ ।
इजरायली मिडिया ‘द जेरूसलेम पोष्ट’ ले विज्ञान र प्रविधि मन्त्री ओपीर अकुनिसको दिएको जानकारी भन्दै समाचार राखेको छ । यदि यो सफल भयो भने, यो सम्पूर्ण विश्वको लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ । अहिले सम्म, यसको उपचारको लागि कुनै औषधि बजारमा उपलब्ध छैन । भाइरस संसारका ९२ भन्दा बढी देशहरूमा फैलिएको छ । यस कारणले गर्दा ३,५०० भन्दा धेरै मानिस मरेका छन्, जबकि १ लाख ५० हजार भन्दा बढी संक्रमित छन् ।
एक मिडिया रिपोर्ट अनुसार, इजरायलको गालील रिसर्च इन्स्टिच्यूटका वैज्ञानिकहरु विगत चार बर्षदेखि संक्रामक ब्रोन्काइटिस भाइरस ९आईबीभी०को लागी औषधि विकास गर्न अनुसन्धान गरिरहेका थिए। यो ब्रोन्कियल रोग हो जुन कुखुरामा हुन्छ। वैज्ञानिकहरूले यसको उपचारको लागि औषधि सफलतापूर्वक तयार गरेका छन्।
यो पनि सरकार द्वारा पशु चिकित्सा संस्थान मा एक पूर्व क्लिनिकल परीक्षण पछि पारित गरिएको छ। संस्थानका वैज्ञानिक डा. चेन काटजले भने, ‘यो औषधि केहि प्रकारको भाइरसको उपचारमा प्रभावकारी छ। यसमा प्रोटिनहरू समावेश छ । जुन मांसपेशीय टिशूहरूमा एन्टीजेन्स बनाउँछ। यसले शरीरमा भाइरससँग लड्न एन्टिबडीहरू सिर्जना गर्दछ।’
डा. चेनले अगाडी भने, ‘हाम्रो टोलीले आईबीभीको लागी औषधि तयार गर्न सफल भएपछि कोरोना भाइरसलाई मोडेलको रूपमा लिएको छ । हामी केवल आईबीभीको लागि तयार औषधिको टेक्नोलोजी परीक्षण गर्न चाहन्छौं । यसको लागि, जब हामीले कोरोनाभाइरसको डीएनए जाँच गर्यौं, तब यो पत्ता लाग्यो कि यो कुखुरामा पाइने भाइरससँग मिल्दोजुल्दो छ ।
त्यसोभए मानवका लागि यो प्रविधिमा आधारित औषधी तयार गर्न काम सुरु भयो । यसमा धेरै सफलता प्राप्त भएको छ ।’ डा. चेनले अगाडी फेरि थप्दै भने, ‘अब आईबीवीको लागी तयार गरिएको औषधि नयाँ अर्डरमा राखेर तयार भइरहेको छ। केही हप्तापछि कोरोनाभाइरस विरुद्धको औषधि पनि हाम्रो हातमा हुनेछ ।’
डा. चेन भन्छन्, ‘कोरोना भाइरसको औषधि बनाउने जिम्मेवारी संस्थानका वैज्ञानिकहरूलाई दिइएको छ। यद्यपि त्यस पछि हामी नियामक प्रक्रियाहरू अपनाएर अघि बढ्नेछौं। यसमा क्लिनिकल परीक्षणहरू र ठूलो मात्रामा औषधि उत्पादन पनि मिसाइएको छ।’ अर्कोतर्फ, विज्ञान र प्रविधि मन्त्री एकुनिसले मन्त्रालयका महानिर्देशकलाई प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले भने,‘यो मन्त्रालय वा विभाग द्वारा ढिलाइ हुँदैन ।’
अनुसन्धान संस्थानका सीईओ डेभिड जिग्दोनका अनुसार औषधि तयार भएको ९० दिन भित्र वितरण गर्न शुरू गरिनेछ । यो कुनै खोप नभएर खाने खालको औषधि हुनेछ । उनीहरु यसका लागि मानव परीक्षणहरू पनि प्रशोधन गर्ने तयारीमा रहेका छन् । उनीहरु यस क्षेत्रमा कार्यरत केही कम्पनीहरूसँग लगातार सम्पर्कमा रहेका छन् ।